တကယ်ချစ်တဲ့သူ မှန်ရင် စုံတွေ့ပါစေ... ...
အားလုံးဟာ တလွဲစီ တခြားစီ
Posted by yangonthu at 11:52 PM0comments
'ကို' လို့ တစ်ခွန်း ခေါ်လိုက်တိုင်း မှာ
Posted by yangonthu at 1:19 AM0comments
တခါမှမတွေ.ဖူးခဲ့တဲ့.... ဧပရယ်မှာဆုံဖူးခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ကိုပြန်တွေ.ခဲ့တယ်
မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး ဒိလောက်စောစောတွေ.ရမယ်လည်း မတွေးထားခဲ့မိဘူး
ဘာရယ်ကြောင့်လည်းတော့ မမေးပါနဲ. အဖြေရှာဖို.ခက်လို.ပါ
တအားလည်း ၀မ်းနည်းတယ် ငိုချင်တယ်
တွေးလေ အဖြေမရလေ ငါတွေဝေတုန်းဘဲလေ
သည်နွေ သတိရစရာတွေ သူအမှတ်ရကာဆွေးနေမလားပေါ့လေ
အမြဲ စိမ်းရင်စိမ်းနီရင်နီနေတက်တဲ့ သူ.အကောင့်လေး ဘယ်တော့မှများပြန်တွေ.ရတော့လေမလဲ
နောက်တကြိမ်ဆိုတာ အခွင့်အရေးရှိရင်တော့ သူပြန်တက်လာမှာပေါ့လေ
ရှေ့ဆက်ပြီး အကျိုးအကြောင်း အကောင်းအဆိုး တွေ.ဆုံကြုံကွဲဓမ္မတာဘဲမို.
၀မ်းနည်းဝမ်းသာ အခက်အခဲကြုံတိုင်းနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့သူကို မေ့ဖို.ဆိုတာ
ထာဝရအမှတ်ရလျက် သိမ်းထားမဲ့အရာတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါတယ်
Posted by yangonthu at 4:10 AM 1 comments
ကံကြမ္မာလှိုင်းကပုတ် ဟိုးအမြင့်ဆုံးသို. ........
အိမ်မှာတီဗီရောက်လာတယ် အောက်စက် ရေခဲသေတ္တာ....
ကံကြမ္မာလှိုင်းကတော့ ဒီလိုဘဲ ပုတ်လိုက် ပြန်ကျလိုက်နဲ.ရှိနေမှာပါဘဲ
စည်းလုံးညီညွှတ်မှု.နဲ. စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု.ဘဲလိုအပ်ပါတယ်။ ။
Posted by yangonthu at 6:23 PM0comments
ဒီနေ. မနက်ခင်းလေးက သိပ်ကိုသာယာတယ်
မြူတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိတ်နေတော့ အေးစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်နေတာပေါ့
ညကတော့ အိမ်မက်တွေမကောင်းဘူး..ဒါပေမယ့် လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးနိုးလာလို.တော်သေးတယ်
အိမ်မက်ကလည်း သူ.အမျိုးတွေလိုက်ရိုက်လို.ထွက်ပြေးရတယ်တဲ့ အဟက်ဟက်
အဲ့ဒီ အိမ်မက်မျိုးမက်တာ နှစ်ခါ သုံးခါလောက်တော့ရှိပြီ....မပြောရက်လို.မပြောပြခဲ့မိပါဘူး
ခုတလောသူလည်း ဘာတွေဖြစ်နေတယ် မသိပါဘူး
မဖြစ်ပါဘူး လူဆိုတာမျိုးကလည်း အကန်.အသတ်ဘောင်ထဲမှာနေရင်ရုန်းထွက်ချင်ကြတာကြီးဘဲလေ
မနက်တိုင်း အဲ့လိုမြင်ကွင်းလေးက စိတ်ကိုကြည့်နူးစေတယ်
တခါတခါ အိမ်ရှေ့ဝရံတာမှာ ဌက်ကလေးတွေလာနားရင်ဆန်တွေပုံးထဲကသွားနှိုက်ပြီးကျွေးရတာလဲ ပီတိတမျိုးဘဲ အမေကတော့မကြိုက်ဘူး အိမ်ပွလိုတဲ့လေ မနက်ပိုင်းအိမ်ခေါင်မိုးထက်ကပန်းပင်တွေကိုရေသွားလောင်းရတာလည်း ပျော်ရွှင်မှု.တမျိုးကိုရစေတယ်
တခါတလေများ ပန်းပွင့်နေတာတွေ.ရင်ပျော်လိုက်တာ ပြောမနေနဲ.တော့။ တန်းကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ပန်းပွင့်ပြီဆိုတာနဲ. သေချာလေးခူး ပလပ်စတစ်အိပ်ကလေးကိုလေမှုတ်သွင်းပြီး ပန်းလေးကိုထည့်ပြီး ဆရာမကို ပန်းသွားသွားပေးတာအမှတ်ရသေးတယ်...အဲ့ဒီနေ.ဆရာမခေါင်းမှာ ကိုယ်ပေးတဲ့ပန်းလေးပန်ထားပြီးစာသင်နေတာတွေ.ရင် စာသင်လို.ကောင်းမှကောင်း...မှတ်မိသေးတယ် တရက်ပေါ့ ဆရာမကိုပန်းပေးပြီးပြန်အလာ သူငယ်ချင်းတယောက်ကရန်လာစတယ် ဟဲ့နင်ဆရာမကို ပန်းပေးပေးနေတာ ဆရာမအမှတ်ပိုပေးအောင်ဖားနေတာမို.လားတဲ့..အဟက်ဟက် ရီလိုက်ချင်တယ်....လို.ပြန်ပြောလိုက်တယ် နင်ပေးချင်ရင်ဝယ်ပေးရမှာလို. ငါပေးတာကငါတို.အိမ်မှာကိုယ်တိုင်စိုက်လို. ပွင့်တဲ့ပန်းကိုငါပေးတာလို. ဘာဖြစ်လဲ မကျေနပ်ရင်လဲသေလိုက်ပါလားလို. ကလေးပီပီ ပြန်ပြောမိတယ်....ခုတော့ လူကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့ အဲ့တုန်းကအဖြစ်အပျက်လေးက ရီရခက်ငိုရခက်အမှတ်တရလေးပေါ့ သူငယ်ချင်းလည်းပန်းပေးတိုင်းအမှတ်ပိုမရဘူးဆိုတာ သိလောက်တဲ့အရွယ်ရောက်နေလောက်ပြီပေါ့ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်အားနဲ.ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုတန်းဖို.ထားတက်မှန်းသိသထက်သိလာခဲ့ပြီလေ အရာအားလုံးကတော့ သင်္ခါရတရားတွေချည်းပါဘဲလေ ..ခုဆိုအိမ်အပေါ်ထပ်ကပန်းတွေပွင့်တဲ့ပန်းခြံလေးလည်းမရှိတော့ဘူး...ကျမ 10တန်းဘော်ဒါတစ်နှစ်သွားနေတော့ ရေမှန်မှန်လောင်းမဲ့သူမရှိလို.သေတဲ့အပင်ကသေ သူများတွေတောင်းလို.ပေးလိုက်တာနဲ. အားလုံးကုန်သွားပြီလေ...ဒီလိုပါဘဲလေ အားလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားလိုက် အသစ်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ. သံသရာလည်နေတာပါ ငါးလေးတွေကိုကြည့်ရင်းသူတို.ကော ဒီကန်ဆိုတဲ့ဘောင်ထဲမှာပျော်ကြပါ့မလားလို.တွေးနေမိတယ်
ကျမဆို ဘောင်အတွင်းမျာနေခဲ့ရတာလေ ကြာပေါ့..တခါတလေ သိပ်မွန်းကျပ်တယ် တခါတလေတော့လည်း စည်းကမ်းရှိတယ်လို.ပြောရမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်နင်ဘောင်အပြင်ဘက်ကိုမရောက်ဖူးဘူးဆိုရင်တောင် အပြင်နဲ.အတွင်းကြားကနေရာလေးကိုသွားကြည့်ပါလားပိုပျော်ဖို.ကောင်းတယ်တဲ့ သူပို.ပေးမယ်တဲ့လေ ပြောတဲ့သူကယောကျာ်းလေးပါ ငါအပျော်ရှာနေတာမှမဟုတ်တာဟာ တခါတလေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးနေကြည့်ချင်တာပါလို. ....ဒီလိုရေးလို. ကျမကိုစိုးရိမ်ပေးတက်တဲ့တယောက်သောသူက ပူပန်နေမှာမြင်ယောင်နေသေးတယ် အဟက်ဟက်.....မပူပါနဲ.ရှင်ရယ် ကျမကိုယ်ကျမသိပါတယ်။အပြင်မှာလည်းအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ မသိဘူး...အဲ့ယားကွန်းဖွင့်ထားတာတောင်ယပ်တောင်ခပ်နေသလောက်ဘဲရှိတယ် ခဏနေ ညီမလေးကျောင်းကိုသွားကြိုရဦးမယ် သူကအတန်းတင်စာမေးပွဲဖြေနေတာ ဒီနေ.နောက်ဆုံးလေ..မမလာကြိုပေးပါတဲ့ သေချာမှာလိုက်တော့လည်းသွားကြိုရမှာပေါ့။ဒိနေ.ပြီးရင် သူတို.နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်ပြီလေ ကျမတုန်းကဆိုရင်နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကိုသိပ်ရောက်ချင်တာ။နွေကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်ပြီလို.လဲဆိုရော ကျောင်းပြန်တက်ချင်ပြန်ရော သူငယ်ချင်းတွေနဲ.ခွဲရမှာစိုးလို.လေ...အင်း...စာရိုက်နေတာနဲ.ညီမလေးကိုကျောင်းကြိုချိန်တောင်နီးပေါ့။သူတို.ကျောင်းကလည်းကားတွေလူတေါ ကလေးမိဘတွေနဲ.ရှုတ်ရှက်ခတ်နေတာ ကြိုရောက်ထားကာမှတော်ကာကျမယ်.......။။။
Posted by yangonthu at 10:15 PM0comments
ဘ၀ဆိုတာ တကယ်တော့ ခရီးကတိုတိုလေးရယ်ပါ
ရခဲ့လှတဲ့လူ.ဘ၀မှာ မပျော်ဘဲ လွယ်လွယ်လေးနဲ.ပြန်ထွက်မသွားချင်ကြပါနဲ.
မျက်စိရှေ့တင်ပါ တော်တော်လေးလဲ သံဝေဂရမိတယ်..
ကလေးလေးတယောက် အလွန်ဆုံးရှိလှမှ 10နှစ် 12နှစ်ပေါ့
အချိုမှုန်.တထုတ် ကြက်သွန်နီ50သား ဆီ...စာရင်းစာရွက်လေးကိုင်ပြီး အဒေါ်ကြီးကိုလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရွက်ပြနေတယ်
ကျမနဲ.သူငယ်ချင်းလည်း သူလေးဝယ်ပြီးမှဝယ်တော့မယ်ဆိုပြီး ခဏရပ်စောင့်နေတာပေါ့
သူငယ်ချင်းကတောင် နောက်နေသေးတယ် နင်ကလေးမွေးရင်ဒီလိုကလေးလေးမွေးတဲ့
ဖျက်ခနဲ. အဖြစ်အပျက်ကမြန်လွန်းလို. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မယုံနိုင်ဘူး......
ကျွီ......ဒုန်း ဆိုတဲ့အသံကြီးအဆုံး လူတွေရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန်တယ်
ဟာ....သွားပြီ တကယ်ပါ လူဆိုတာလိပ်ပြာတောင်လွင့်သွားသလား မှတ်ရတယ်
နှလုံးတခုလုံးကအပြင်ကိုခုန်ပေါက်ထွက်ချင်လာ သလို တုန်ခါနေတယ်
သွေးအိုင်ထဲမှာ ကြည့်ရက်စရာတောင်မရှိတဲ့ ခုနကကလေးလေး........
အားး..... ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ကလေးရယ် ဘယ်ဘ၀ဘယ်လိုအတိတ်ကံတွေပါလာပါလိမ့်
ကျမလည်းဆက်မကြည့်ရဲတာနဲ. သူငယ်ချင်းလက်ဆွဲပြီး မြန်မြန်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်
ကျူရှင်ရောက်တော့ လူကရင်တုန်လို.မပြီးသေးဘူး ဆရာကတော့သမီးရရဲ.လားတဲ့
တနေကုန် အဲ့ဒီမြင်ကွင်းက ခဏခဏပြန်ပြန်မြင်နေတယ် အာရုံထဲမှာ သူမျက်နှာလေးဘဲပေါ်ပေါ်လာတယ်
စိတ်ကိုလွဲတယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ရီစရာတွေပြောတယ် စာထဲမှာစိတ်နှစ်ထားတယ်
မရပါဘူး စိတ်ကလွတ်သွားတာနဲ. အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဘဲပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်
ဟူးးး ...ဆိုးလိုက်တာနော် တကယ်ဆိုမနက်အစောကြီးမှာ မဖြစ်သင့်ဆုံးမမြင်သင့်ဆုံမကြားသင့်ဆုံးဖြစ်ရပ်ပေါ့
အခက်အခဲတွေကိုကြံ.ကြံ.ခံပြီး ရခဲတဲ့လူ.ဘ၀မှာ ပျော်ပျော်နေသွားကြရအောင်..။ ။
Posted by yangonthu at 11:11 PM0comments
ဒီညတော့ သည်အပေါက် သေချာပိတ်ဦးမှပါ
အင်း....ကျူရှင်လခ ကျောင်းကားခ မုန်.ဖိုး
အပတ်စဉ်ဈေးဖိုး သတင်းစာ မီတာ ဖုန်းဘေ သန်.ရှင်းခွန် ရေခွန်........
လကုန်ပြန်ပေါ့ 2010ရဲ.ပထမဆုံးလ ဈေးဦးပေါက်ပြီလေ
အလတ်က Scoll တရံလောက်ဝယ်ပေးဖို.ပူဆာထားတယ်
ကြီးတော်က ဗိုက်ထဲကဘာဆိုလားဘဲ စစ်ဖို.ဆိုပြီး
မနက်ဖြန်မနက်တော့ ပဲပြုတ်လေးစောစောထ၀ယ်ဦးမှပါ။ ။
Posted by yangonthu at 10:26 PM 1 comments
ခံစားချက် ..... (1)
Copyright 2009 ဘ၀တစ်ကွေ. .....